Record Desktọpụ dị ka Video: Weghara ọ bụla n'ógbè gị desktọọpụ
> Resource> Record> Record Desktọpụ: Weghara n'akụkụ ọ bụla nke na Desktọpụ
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịhụ ngwá ọrụ dị ike iji nyere gị aka idekọ mpaghara ọ bụla nke ihuenyo, m n'aka na DemoCreator bụ ihe ị na-achọ. Ọ na-enye mgbanwe ndekọ ebe selections mgbe ị na-amalite idekọ desktọọpụ: Ngwa nhọrọ idekọ omume na a họrọ ngwa window; Custom Size idekọ omume n'ime a kpọmkwem ebe na ihuenyo; Full ihuenyo idekọ omume na dum ihuenyo. Nke òkè na desktọọpụ otú ị chọrọ ka ịdekọ? Ọ na-adabere ihe ị chọrọ na-egosi. E nwere ụfọdụ iwu iji họrọ ndekọ nke ebe gị na desktọọpụ. Ebe i nwere ike:
Record ngwa window
Ọ bụrụ na software ime ị chọrọ ka ịdekọ bụ na otu window na e nwere ndị ole na ole dialog igbe ma ọ bụ mmapụta gbasie na-egosi si na ndekọ akporo nke ndekọ window, họrọ a nhọrọ dị mma. Dialog igbe na mmapụta gbasie ga na-egosipụta ma ọ bụrụ na ha bụ ndị n'ihu na nta karịa isi window. Ihe ọ bụla nke gbatịrị n'èzí nke ókè nke isi window ga-ebipụ. Gbalịa na-agba ọsọ gị na ngwa ịhụ ka ọ ga-OK ime ka ngwa window dị ka ndekọ ebe. Ọzọkwa, buru n'uche na ndabara size nke ekwusara nkiri ga-abụ otu dị ka gị ngwa window. Iji mee ka ọ na-egwu na a nta ebre ebe, o na-atụ aro iji weghachi ala ngwa window ma na-eme gị ndekọ. Ma ọ bụ i nwere ike ịgbanwe ebipụta akụkụ na ọnọdụ dialog igbe. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike itinye mbugharị akpọkwa ka ibubaa mesie nkọwa maka resized slides. Họrọ ngwa ị chọrọ ka ịdekọ na desktọpụ gị, na snap na ya, mgbe ahụ, i nwere ike na-amalite gị ndekọ.
Record omenala size
Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ịdekọ a akụkụ nke gị na desktọọpụ ọrụ, ị nwere ike hazie ndekọ ebe. Ọ bụla ọrụ dị ka òké nkọcha na keystroke na na ebe a ga-weghaara. Nke a bụ ụzọ dị mfe iji tọọ ndekọ mpaghara na akụkụ ruru n'ihi na gị video ma mee ka ọ ezi ezi ka ọkpụkpọ ma ọ bụ Web peeji ebe ị chọrọ ka-egosi ihe nkiri. Ọzọkwa, e nwere ụfọdụ tupu set akụkụ maka desktọọpụ ndekọ: 800 * 600, 640 * 480, 400 * 300. Eme ụfọdụ ndekọ mmeghari iji jide n'aka na ị na-ihe niile ị chọrọ igosi na-eme n'ime na mpaghara. Gị ịtọ kpọmkwem size site na iji kọmputa ede na pikselụ data na ọnọdụ ntinye, na i nwere ike ịdọrọ rektangulu-egosiputa na ndekọ ebe.
Ịdekọ ihuenyo zuru
A nhọrọ bụ ka i wee weghara ihe niile na-eme gị dum na ihuenyo. Tụlee na obere ebe ndekọ, ọ ga-ewe elu karịa na kọmputa akụ na ike a ibu faịlụ. Otú ọ dị, na ọ bụrụ na e nwere n'ezie elu mkpebi ileba anya maka ihuenyo zuru ndekọ, eleghị anya ị na-achọghị ka ike a video faịlụ na nwere na-egwuri azụ na otu mkpebi na a n'ezie nnukwu ọkpụkpọ. Ọ bụrụ na o kwere omume, belata gị na ihuenyo mkpebi tupu ị malite idekọ gị na desktọọpụ. Ka ihe atụ, ọ bụrụ na ị na-eji ihuenyo mkpebi nke 1026 * 768 ma ọ bụ karịa, i nwere ike ịgbanwe mkpebi dị ka 800 * 600 na i ndekọ. Ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka ọ na-egosi na a nta ọkpụkpọ dị ka 640 * 480, ị nwere ike resize nkiri akụkụ dị ka 80% nke mbụ otu. Ya mere ị pụrụ-ebipụta video nke nta akụkụ, ma ọ pụrụ ịbụ a obere blurring. Otú ọ dị, i nwere ike tinye mbugharị ihe ito ihe n'ógbè gị dere desktọọpụ na-egosi ụfọdụ nkọwa. Ị pụrụ ọbụna ịtọ mbugharị akpọkwa site gị niile ndekọ slides.
Mma gị na kọmputa ịrụ ọrụ n'oge ihuenyo-kpọọ usoro, karịsịa mgbe ị chọrọ weghara dum na kọmputa, ị ga mma belata ihuenyo mkpebi (atụ, i nwere ike belata gị na ihuenyo mkpebi si 1024 site 768 800 site 600) na agba mma.
Niile na ihe niile, isi ụkpụrụ ndekọ ihuenyo bụ ime ka obere gụgharia nkiri na-egosi ihe anyị chọrọ na-egosi. Ugbu a dị nnọọ ibudata DemoCreator na-eso Atụmatụ weghara mpaghara ọ bụla nke desktọọpụ dị ka gị mkpa!
Olee otú weghara Videos si ihuenyo
3 Mfe Nhọrọ maka ndekọ Video Games